थाहै नपाई लाग्छ गिजाको रोग (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
शुक्रबार, २० मंसिर २०७६ /
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य क्षेत्रको बलियो जगः उप मेयर चौधरी
सेती अस्पतालका लागि खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट थन्कियो
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च २ लाख ५५ हजार
टाइफाइडविरुद्ध विकसित नयाँ खोपको 'ट्रायल' नेपालमा !
थाहै नपाई लाग्छ गिजाको रोग (भिडियोसहित)
गिजा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै मानिस अनभिज्ञ जस्तै छन् । ज्ञान भएकाहरू पनि त्यति सचेत भएको पाइदैन् । अझ कतिपयमा गिजा र दाँतको रोग एकै हो भन्ने गलत बुझाई छ । जसले गिजाको रोग क्रोनिक अवस्थामा पुगेर अन्य अंगमा गम्भीर असर पार्न थालेपछि मात्रै उनीहरू उपचारको लागि अस्पताल पुग्नेगर्छन । गिजामा कस्ता कस्ता रोग लाग्छ र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा दन्त चिकित्सक तथा गिँजारोग विशेषज्ञ डा. रुवी दासको सुझाव यस्तो छ :—
गिजामा लाग्ने रोगलाई पेरियोडेन्ट भनिन्छ । गिजामा धेरै प्रकारका रोग लाग्छन् । गिजामा लाग्ने रोग तुरुन्त दुख्ने, बाहिरबाटै समस्या देखिने खालको नहुन सक्छ । गिजामा रोग लागेको बर्षौपछिसम्म पनि दुखाई नहुन सक्छ । यही कारण पनि गिजा सम्बन्धी रोगलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृति बढी छ ।
गिजामा रोग लाग्ने मुख्य कारण :
दाँत, मुखको सरसफाईमा कमी ।
दाँतको पिधमा फोहोर अड्कनु ।
गिजामा घाउ हुँदा वा कुनै संक्रमण हँुदा ।
शरीरमा हर्मोनको गडबडी ।
लामो समय ध्रुमपान तथा मध्यपान ।
गिजाको परीक्षण नगरी गिँजामा रोग लागेको सुरु मै थाहा नहुन सक्छ । तर, समस्या देखिएको धेरै समयसम्म पनि उपचार नगरे गिजामा दुख्ने हुन थाल्छ ।
गिजाबाट रगत आउने ।
दाँतले गिजाको भाग छोड्ने वा दाँत हल्लिने ।
गिजाबाट पिप निस्कने ।
गिजा सुन्निने ।
गिजाको रंगमा परिवर्तन आउने ।
श्वास गनाउने आदि ।
गिँजा रोगबाट बच्ने उपाय:
गिजामा कुनै समस्यानै नआए पनि कम्तीमा वर्षको एक पटक गिँजाको परीक्षण गराउने ।
मुख र दाँतको सफाई गर्ने ।
बिहान बेलुका खाना खाएपछि ब्रस गर्ने ।
ब्रस गर्दा ४५ डिग्रीको कोणमा चारै तिर घुमाएर गर्ने ।
फल्स गर्ने ।
गिजामा कुनै पनि समस्या आए सहेर नबस्ने, गिँजा रोग विशेषज्ञसँग परीक्षण गराइहाल्ने ।
दाँतको उपचार गराउँदा दक्ष चिकित्सककोमा मात्र गराउने ।
उपचार पद्धति :
गिजाको उपचार महंगो छ, उपचार गर्न निकै गाह्रो पनि हुन्छ जस्ता भ्रम धेरैमा छ । तर रोगको सुरुवाती चरणमै पहिचान भए यसको उपचार एकदमै सहज र सस्तो छ । पछिल्लो समय गिजाको पm्ल्याप सर्जरी हुन्छ । यसमा गिजालाई कोरेर सफा गरिन्छ । लेजरको माध्यमबाट पनि गिजा रोगको उपचार गरिन्छ ।
#डा. रुवी दास
Last modified on 2019-08-01 06:28:01
रुपन्देही, २० मंसिर । ‘गाउँनगरमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य...
कैलाली, २० मंसिर । सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट थन्किएको...
काठमाडौं, १९ मंसिर । एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रियापश्चात १० दिन अस्पताल भर्ना भएर...
काठमाडौं, १९ मंसिर । टाइफाइडविरुद्ध विकास गरिएको नयाँ खोपको 'ट्रायल'...
OM SAMAJ DENTAL HOSPITAL
पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक खोप विकास
तपाईको बच्चाले पिसाब कम गरिरहेको त छैन ? मिर्गौला रोग भएको पनि हुनसक्छ (भिडियो सहित)
शल्य चिकित्सकहरुको तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो (भिडियो सहित)
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मन्त्रीलाई भनेः हाम्रो न्यूनतम ज्याला तोकिदिनुहोस्
बच्चामा हुने पिसाव संक्रमणले मिर्गौलासमेत बिग्रन सक्छ
बाथ रोग के हो ?कसरी बच्ने ? डा. दीपा शाह
आँखामा आनो आउने समस्याले सुगर पनि हुनसक्छ : डा. ढुंगेल